Walaac ka taagan amniga goobta shirka | KEYDMEDIA ONLINE
Walaac ka taagan amniga goobta shirka
Warar is khilaafsan ayaa kasoo baxaya walaac ka taagan amniga goobta uu ka dhici doono shirka lagu wado in berri uu ka furmo Teendhada Afisiyooni.
UPDATE: Inta aan warkaan diyaarineynay ayaa Warsaxaafadeed kasoo baxay hogaanka AMISOM lagu xajiijiyay in AMISOM ay sugi doonto Amniga Xeradda Shirka ka dhacayo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Walaac xoog leh ayaa laga soo sheegayaa amaanka goobta shirka oo la sheegay in la wareegeen ciidamada Amisom, iyadoo uu soo dhammaaday shir looga hadlayay ammaanka goobta uu shiku ka dhici doono.
Ciidamadda madaxda oo ay ku jiraan kuwa federaalka Soomaaliya ayaa laga reebi doonaa lbaabada laga galo garoonka Aadan Cadde, sida illo kamid ah Sirdoonka Soomaaliya ay Keydmedia Online u xaqiijiyeen, waxaana loo qorsheeyay in labada albaab ee Mariina Gate Madiina Gate lagu reebo ciidamada oo dhan.
Hayeeshee warar goor dambe oo fiidkii ah soo baxay ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ay la wareegeen ammaanka hoolka Teendhada Afisyooni ee lagu wado in shirka uu ka dhaco berri, arrintani oo haddii ay sax noqotana keeni karta inuu baaqdo shirka oo horay shaki loo galiyay qabsoomiddiisa, kaddib wareysigii madaxweyniha Puntland uu siiyay idaacadda BBC da.
Si kastaba ha ahaatee walaac xoog leh ayaa laga qabaa shirka berri lagu wado inuu ka furmo magaalada Muqdisho, sugidda amniga goobta uu shirku ka dhacayo waa mid ay horay u ballan-qaadeen ciidamada AMISOM waana sida ay ku yimaadeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo horay u qaadacay shirar uu iclaamiyay madaxweyne Farmaajo iyagoo sheegay in ay naftooda uga baqayaan ciidamda ka amar qaata Farmaajo ee Gorgor iyo Haramcad.
AMISOM ayaa sheeegtay in ay suggi doonto amniga Shirka oo ka dhici doono gudaha Garoonka Aadan Cadde.
Xunbo ka tirsan Aqalka Congaress-ka Maraykanka ayaa ku taliyay in dib u eegis lagu sameeyo xiriirka USA la leedahay Dowladda Fadaraalka Soomaaliya, waxayna soo jeediyeen in cunaqabateyn la saaro sakhsiyaadka caqaqabadda ku ah xasilloonida Soomaaliya.
Odayaasha dhaqanka Hawiye oo ka hor yimid muddo kordhinta
Warar 13 April 2021 16:47